नक्खु जेलमा थुनिने म पहिलो राजबन्दी हुँ – श्यामप्रसाद – DreamLandNepal.com
दुईतिरै भयो– वीरगञ्जमा र काठमाडौँमा । चावहिलमा मेरो मामाघर थियो– चुच्चेपाटी भन्ने ठाउँमा । म त्यहाँ मामाघरमा पनि बस्थेँ । मामाघरमा बसेको बेलामा दरवार हाइस्कुलमा पनि भर्ना भएर ४, ५ कक्षा पढेको हुँ । अनि त्यसपछि बुवा वीरगञ्ज सरुवा भएपछि वीरगञ्ज गएको बेलामा त्यतै भर्ना भएर पढेँ । पछि त म गर्मी महिनामा गर्मी छल्न मात्रै विदाको समयमा यता आउने गर्थें ।
बुवा बितिसक्नुभएको थियो । आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर थियो । आफ्नो र आमाको जीविका चलाउन म आफैँ काममा खट्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछि फेरि जाँच दिने वा विद्यालय पढ्ने कोशिस गरिन । मैले सानोतिनो पुस्तक पसल थापेँ अनि आफ्नै पसलमा भएका साहित्यका किताबहरू, राजनीतिका किताबहरू पढ्दै चित्त बुझाउन थालेँ । बिस्तारै अध्ययनशील बानी बस्यो । स्कुल क्याम्पस गएर पढ्न पाइन भन्ने मलाई पिर लाग्न छाड्यो ।
लेखनको आरम्भ पनि प्राय किशोरावस्थादेखिनै सुरु भएको हो । म आठ बर्षको हुँदा बुवाले मेरो ब्रतबन्ध गरिदिनुभएको थियो । ब्रतबन्धका मेरा गायत्री गुरुचैँ मेरा मामाका ससुरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ लेखक हुनुहुन्थ्यो कृष्णचन्द्र अर्याल । उहाँ गोरखापत्रमा सबैभन्दा धेरै वर्ष जागिर खाएको मान्छे हो । अनि उहाँका अनेक किसिमका किताबहरू पनि प्रकाशित छन् । साथसाथै कृष्णलाल अधिकारी जस्ताहरूको उहाँहरूको एउटा गुप्त डप्फा थियो । उहाँहरू राजनैतिक कामहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो । त्यो सबै कुरा मलाई बताउनुहुन्थ्यो । हेर बाबु हामीले होस गर्नुपर्छ, कुरा बाहिर लैजानुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो । जो पायो उहीसित हामीले बुझेको कुुरा खोल्नु हुँदैन भनेर पनि सिकाउनुहुन्थ्यो ।
२००१ सालदेखि तपाइँका रचना–सिर्जना प्रकाशित हुँदै आएका छन् । तपाइँ आफैँ छाप्ने छपाउनेतर्फ पनि लाग्नु भो । ‘स्वास्नी मान्छे’, ‘साहित्य’ र ‘सेवा’ जस्ता पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको छ । रमेश विकलको पहिलो प्रकाशित कथा ‘सेवा’ मै प्रकाशित भएको हो भनी विकल स्वयम्ले एउटा अन्तर्वार्तामा बताउनुभएको थियो । यसरी वीरगञ्जबाट पहिलो साहित्यिक पत्रिका निकाल्ने साहित्यिक पत्रकारको रूपमा पनि तपाइँ सम्मानित हुनुहुन्छ । यो छाप्ने छपाउने कुराचैँ कसरी सोच्नुभो तपाइले ?
त्यो चाहिँ धेरै निस्कन सकेन । ४, ५ अङ्क मात्रै निस्कियो । अनि ‘साहित्य’ र ‘स्वास्नीमान्छे’ पत्रिकाचाहिँ काठमाडौँबाट चलाएको हो । त्यो भने अलिक बर्ष चल्यो ।
वीरगञ्ज जेलको प्रसङ्ग ल्याउनुभो तपाइँले । यता काठमाडौँमै पनि नख्खु जेलमा समेत तपाइँ थुनिनुभएको थियो । वीरगञ्जको भन्दा अगाडिको कुरो हो क्यारे । नखुमा त त्यो बेला गोपालप्रसाद रिमाल पनि थुनिनुभएको थियो । तपाइँ सँगै हुनुहुन्थ्यो ? यो जेल बसाइका बारेमा केही बताइदिनुस्न ।
नख्खुजेल पहिले आवाद गर्ने राजबन्दीहरूमा पर्थें म पनि । गोपालप्रसाद रिमाल, कृष्णप्रसाद भट्टराईका दाजु गोपालप्रसाद भट्टराई पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । एकजना भक्तपुरका लोकेश, अर्का चेताराम भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी चारजनालाई चाहिँ एउटै गाडीमा राखेर त्यहाँ लगेका थिए पहिलो पटक । त्यस अघि त्यहाँ कुनै राजबन्दीलाई लगिएको थिएन । म राणाकालमै तीन चोटि जेल परेको छु । तीनतीन चोटि त्यो पनि बेग्लाबेग्लै जेलमा । त्यसैले मैले धेरैतिरका जेलको अनुभव गर्न पाएँ । कहिले वीरगञ्जको जेल, कहिले सदरठानाको, कहिले सिंहदरबार गारत, सिंहदरबारमा त फेरी कैले सिंहदरवारको घण्टा ठोक्ने ठाउँमा । यसरी जेलबसाइकै क्रममा त्यो बेलाका विभिन्न राजनीतिज्ञहरूसित सङ्गत र सम्पर्क हुन पायो । प्रजा परिषदका नेताहरू टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, नेपालको पहिलो राजनैतिक दल प्रचण्डगोर्खाका खड्गमानसिंह बस्नेत यस्ता सबैसित सङ्गत भयो । उहाँहरू जेलभित्रको पनि जेल– त्यसलाई कालकोठरी भनिन्थ्यो– मा बस्नुहुन्थ्यो । अनि हामीलाई उहाँहरूसित बोल्न कुराकानी गर्न दिइँदैनथ्यो । हामी चाहिँ शान (इशारा) लगाएर आपसमा कुराकानी गथ्र्यौं । लुकाएर सङ्केतबाटै चिठीपत्र ओहोरदोहोर गथ्र्यौं । त्यसमध्ये मैले टङ्कप्रसादका चिठी त ‘आएका केही चिठी‘ भन्ने मेरो चिठीसङ्ग्रहको किताबमा पनि पारेको छु ।
त्यस्तो दुःख दिया ठाउँमा थुनिएको थिएँ । खानका निम्ति बिहान सिदा ल्याएर दिन्थे । अनि मैले चाहिँ त्यो सिदा नलिएर त्यसै त्यहीँ राखिदिएँ । सिदा नलिएको देखेर पालेले जाहेरी ग¥यो– त्यो मान्छेले त सिदा राख्द्या राख्द्यै छ, केही चलाएको हैन, खाएकै हैन, हिजो देखिन् भनेर । अनि हाकिम आएर– ए के अनसन बस्या हो भने । कहाँ अनसन बस्नु, कस्तो भोक लागिरहेछ भनेर मैले भनेँ । उनले– लु हेर, किन नखाको त भनेर सोधे । मैले सधैँ गीता पाठ गरेर खाने ग¥या थिएँ, अहिले किताबै ल्याउन दिएनन् अनिखेरी कसरी खानु त भनेँ । ल, पाठ गर्ने गीताको किताब ल्याउन दिनु यल्लाई भनेर हाकिम फर्किए । अनि मेरो पालो चहिँ मामा घरबाट गीताको ठूलो किताब ल्याउलान् र अप्ठ्यारो होला, कहिले कुन जेल कहिले कुन जेल पठाउलान् भनेर सानो सानो गीता खल्तिमा हालेर हिंड्न हुने खालको मगाएँ । अनि त्यही गीताको किताबमा दुईटा हरफको बीचमा भएको खाली ठाउँमा सिसाकलमको टुक्राले लेख्न थालेँ । आफूलाई लेख्न मन लागेका कुराहरू लेख्यो फेरि २÷४ पाना पल्टायो अनि फेरि त्यहाँ लेख्यो, २÷४ पाना खाली राख्यो अनि फेरि लेख्यो । मलाई पल्टनको ब्यारेकमा लगेको बेलामा पनि उनीहरूले मैले लेखेको चाल पाउँदैनथे ।
अहिले म ८२ वर्षको उमेरमा हिँडिरहेको छु । अब पहिले जस्तो सक्रिय भएर त लाग्न पनि सकिन्न । तर निस्क्रिय नै त बसेको छैन नि । फाट्ट–फुट्ट भए पनि लेख्ने गरिराखेको छु । पढ्ने काम पनि गरिरहेकै छु । अब जस्तै भनौँ– अहिले मेरा पुराना साथी कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान बित्नुभो । उहाँकै विषयमा एउटा लेख लेखेर ‘भानु’ पत्रिकामा दिएँ । ‘भानु’को कृष्णचन्द्र विशेष भन्ने अङ्कमा त्यो निस्किएको छ– ‘साथी कृष्णचन्द्रसिंह’ भनेर । उहाँसितको सम्बन्ध कहिलेदेखि, कस्तो रह्यो, के रह्यो भनेर अन्तिम बेलासम्मका सबै कुरा त्यसमा पारेको छु । त्यसैगरी अवस्था हेरिहेरिकन केही न केही लेख्दै पनि छु । नयाँ धेरै लेख्न नसकेको हुनाले पुराना आफ्ना रचनाहरू कहाँ कहाँ छन् विभिन्न पुराना पत्रपत्रिकाहरूमा छरिएर रहेका तिनीहरूलाई बटुल्ने काम पनि गर्दैछु । आफैँ धेरै खोजी गर्न पनि सकिन्न । साथीहरूको सहयोग लिन्छु । मेरो विषयमा विद्यावारिधि गर्ने धर्मराज अधिकारीलाई लौन, मलाई फलाना फलाना लेख चाहिएको छ खोजिदिनु प¥यो, यहाँको सहयोग चाहियो भनेर भन्ने गरेको छु । उहाँले पनि सकेसम्म मैले खोजेका सामग्री फेला पारेर ल्याउनुहुन्छ । यसै गरी पुराना रचना बटुलेर सङ्ग्रह निकाल्ने पनि गर्दैछु । दिनचर्या यसरी नै बितिरहेको छ ।
अन्तरवार्ता पढ्दा यति धेरै यथार्थमा म कहिले पुगेको थिइन। सीधै वक्तासंग भलाकुसारी गरे झैं लाग्यो। अन्तरवार्ताकारप्रति धन्य रहनु पाठकीय मामिला त भइहाल्यो।
एउटा सिङ्गो इतिहास पढियो, धेरै लाइ यस अन्तर्वार्ता प्रश्तुति ले प्रेरणा दिने छ! जीवनको वास्तविकता तिर हिड्ने प्रेरणा प्रदान गर्ने छ! धन्यबाद प्रशान्त जी!
Interesting and inspiring interview !
जीवन संघर्ष र सत्यताको पथमा हिड्न/हिडाउन प्रेरित गर्ने प्रेरणादायी एतिहासिक दस्ताबेज यो अन्तर्वार्ता ~~सुन्दर मौकाको लागि प्रशान्त दाजुप्रती बिशेष आभारी छु |